Mareykanka oo sheegay inay ka go’antahay xasilinta Somalia iyo la dagaalanka Al shabab
Walxa aan la Garanayn ee Lagu Arkay Koonfurta iyo Galbeedka Hargeysa
Hargeysa Sabti 6 October 2012 SMC
Markii aan caawa dhegaystay warbixintii Guddoomiyaha Salaxlay ee ku saabsanayd waxyaabaha aan la agaranayn ee lagu arkay deegaamada ku dhawdhaw koonfurta Hargaysa iyo galbeedkeeda, Waxaan isku dayay in aan wax ka ogaado in ay dhacdadan oo kale ka dhacday adduunka meelo ka mid ah.
Baadhitaan aan ku sameeyay interntetka waxaan ogaaday in dhacdooyin la mid ah arrintan uu qeexay Guddoomiyuhu inay ka dhaceen meelo badan oo ka mid ah caalamka, sida Maraykanka iyo Yurubba, taas oo markii ugu horraysay amakaag ku ridday dadkii ku noolaa goobihii ay ku habsatay amuurtan cusubi oo ku ugub caalamka uguna yeedheen magacyo ay ka midyihiin "chemtrail, chemweb, whitestuff iyo qaar kale". Meelaha qaar dadku waxay soo sheegeen inay waxyeelo gaadhsiisay xoolaha, tuhun badana waxay ka qaadeen dawladahooda.
Haddaba arrintani maaha markii ugu horraysay ee wax lala yaabaa ay ka dhacdo dhulkeena illaa sanakii 1991kii. Horraantii sanadkaas(1991) waxaa Hargaysa ka da'ay roob aad daamur moodo. Xilligaas oo ku beegnayd markii Kuwayt lagu dalaalamayay, oo ay dabaylaha Maansuunku (sidaan qabo), ay soo qaadeen qiiqii faraha badnaa e ka dhashay hubkii laysku ridaayay iyo ceelashii shiidaalka ahaa ee gutay.
Waxaa kale oo 1995-kii ka dhacay deegaamada Ceel-Afwayn, Jibin ama wax aad moodo gariir wayn oo aan la arag meel uu ku dhacayo taas oo laga dareemay ilamaa Qorilugud sidii ay ii sheegeen dadkii deegaankaasi.
Siday aniga ila tahay, waxaan filayaa in ay walxahan soo qaadeen dabaylaha Maansuunka ee inagaga imanaaya dhinaca Waqooyiga oo laga yaabo in uu yahay kiimikals lagu buufiyay hawada sare si ay u sameeyaan daruur beenaadyo ka celiya wadamada Khaliijka qorraxda.....???????? Bal hadaba akhristayaal ila daawada fiidiyowyadan aan hoos ku soo lingaxay bal idina ka sii amba qaada halkaas baadhitaankiina.